Mpanamboatra sy mpamatsy WPC Cladding avy any ivelany any ivelany China Lihua
3D fanaovana peta-kofehy Decking
Fametahana rindrina mahazatra
3D mitaingina rindrina vita amin'ny rindrina
Fiarovan-drindrina miaraka amin'ny rindrin'ny mpiara-miasa
Vilany voninkazo WPC
Fiaraha-miasa ivelan'ny trano miaraka amin'ny Wood Composite WPC Cladding
Fananana entana:Fametahana WPC
Fandoavana:TT / LC
Vidiny:$ 3,84 / M
Loko:Chocolate, Gray, Brown Brown, Brown na namboarina
Seranan-tsambo fandefasana:Seranan-tsambo Shanghai
Co-extrusion WPC Cladding
Dobo pisinina, zaridaina ivelany
Voasoka na Sanding
● Co-extrusion, ny haitao farany amin'ny haingam-pandrafetana hazo, ity haitao mandroso ity dia miampy miaraka amin'ny fotony, ny fitaovana mitafo azy no manome ny seha-pihariana tokana sy avo lenta ny birao tsirairay avy. , Ny velarana dia tsy hitatra ary hifanaraka toy ny fitambarana hafa, Mandritra izany fotoana izany ny fidiran'ny hafanana ambany dia midika fa ny tongotra tsy mitaky no ho tia azy, miampy ny fisondrotan'ny UV avo izay loko maharitra ao aminy dia haharitra mandritra ny taona maro.
● Ny tontolon'ny rindrin'i Lihua miaraka amin'ny extruded rindrina dia mahavita fiovana miloko tsy misy fetra sy tena izy, raha tsy ampitahaina amin'ny hazo voajanahary fotsiny, ity haitao mandroso sy manavao ity dia ahafahana mampifangaro loko tsy manam-paharoa, manome ny iray amin'ireo akanjo mitambatra tsara indrindra!
Tsy maninona ny loko mahazatra na ny loko mifangaro, azonay atao ny mandray ny fanapahan-kevitrao.
Fanoherana ny fiantraikan'ny besinimaro EN 15534-1: 2014 Fizarana7.1.2.1
EN 15534-5: 2014 Fizarana 4.5.1 Tsy misy na dia iray aza amin'ireo santionany maneho fahombiazana Tsy misy triatra amin'ireo santionany andrana
Toetoetran'ny lasitra EN15534-1: 2014 AnnexA
EN 15534-5: 2014 Fizarana 4.5.2 Fivoahana eo ambanin'ny enta-mavesatra 500N ≤5.0mm
Enta-mavesatra farany ambany amin'ny vaky Tarehin-tarehy: enta-mavesatra be indrindra: midika hoe 1906N
Fihenam-bidy amin'ny 250N: 0.64mm midika hoe miverina miverina:
Enta-mavesatra indrindra: Midika 1216N
Fivoahana amin'ny 250N: 0.76mm
Mivonto sy mitroka rano EN 15534-1: 2014 Fizarana8.3.1
EN 15534-5: 2014 Fizarana 4.5.4 Midina ny fivontosana: ≤10% ny hateviny, ≤1.5% ny sakany, -0,6% ny halavany
Famoahana Max: ≤12% ny hateviny, ≤2% ny sakany, ≤1,2% ny halavany
Midika: ≤8%, Max: ≤10% Midina ny fivontosana: 2,25% ny hateviny, 0,38% ny sakany, 0,15% ny halavany
Max Swelling: 2,31% ny hateviny, 0,4% ny sakany, 0,22% ny halavany
Fitrohana rano: Midika: 5,46%, Max: 5,65%
Coefficient fanitarana hafanana Linear EN 15534-1: Fizarana9.22
EN 15534-5: 2014 Fizarana 4.5.5 ≤50 × 10⁻⁶ K⁻¹ Midika: 46.8 x10⁻⁶ K⁻¹
Misintona amin'ny fanoherana EN 15534-1: 2014 Fizarana7.7
EN 15534-5: 2014 Fizarana 4.5.6 Hery tsy nahomby: 479N,
Sanda midika: 479N,
Fomba tsy fahombiazana: 479N
Nisy ny triatra tamin'ny santionany andrana
Famerenana hafanana EN 15534-1: 2014 Fizarana9.3
EN 15534-5: 2014 Fizarana 4.5.6 Temperatura fitsapana: 100 ℃ Midika: 0,09%
Teo aloha: Eco-friendly Wood Composite Co-extrusion WPC Decking
Manaraka: Waterproof Composite Wooden WPC Flower Pot Ho an'ny Garden Park
fampidirana rindrina fametrahana rindrina rindrina
F1: Inona no karazana fanamarinana efa azonao?
A: Ny vokatra Lihua dia notsapaina tamin'ny SGS niaraka tamin'ny fenitra fanaraha-maso kalitao WPC EU EN 15534-2004, Eoropeana fanombanana afo Eoropeana misy naoty naoty B, American WPC amin'ny ASTM mahazatra.
F2: Inona no karazana fanamarinana efa nolalovanao?
A: voamarina amin'ny ISO90010-2008 Quality Management System, ISO 14001: 2004 rafitra fitantanana tontolo iainana, FSC ary PEFC izahay.
F3: Iza amin'ireo mpanjifa no efa nandalo ny fanaraha-mason'ny orinasa?
A: Ny mpanjifa sasany avy amin'ny GB, Arab Saudi, Australia, Canada, sns dia mitsidika ny orinasan-tsika, afa-po amin'ny kalitao sy serivisinay izy rehetra.
F4: Tahaka ny ahoana ny rafitra mividy anao?
A: 1 safidio ny fitaovana ilaina ilaintsika, jereo tsara na tsia ny kalitaon'ny fitaovana
Zahao ny fitaovana 2 mifanaraka amin'ny filàntsika sy ny fanamarinana
3 manao fitsapana ny fitaovana, raha lany, dia hametraka filaminana.
F5: Inona ny fenitry ny mpamatsy ny orinasanao?
A: Izy rehetra dia tokony hifanaraka amin'ny fiorenan'ny orinasa ilaina, toy ny ISO, sariaka amin'ny tontolo iainana, avo lenta, sns.
F6: Mandra-pahoviana no miasa ara-dalàna ny mould anao? Ahoana no hitazomana isan'andro? Inona no fahafaha-manao isaky ny maty?
A: Matetika ny bobongolo iray dia afaka miasa 2-3 andro, hotehirizinay aorian'ny filaharana tsirairay, samy hafa ny fahaizan'ny andiany tsirairay, satria ny tabilao mahazatra iray andro dia 2.5-3.5ton, ny vokatra vita 3D dia 2-2.5tons, co- vokatra extrusion dia 1.8-2.2tons.
F7: Inona ny fizotry ny famokarana ataonao?
A: 1.Ataovy antoka ny habetsaky ny loko sy ny loko miaraka amin'ny mpanjifa
2.Artisan manomana ny raikipohy ary manaova santionany hanamafisana ny loko sy aorian'ny fitsaboana amin'ny mpanjifa
3. Avy eo ataovy ny granulation (Omano ny fitaovana), avy eo dia hanomboka ny famokarana, ny vokatra extrusion dia hapetraka amin'ny toerana manokana, avy eo dia hataontsika aorian'ny fitsaboana, avy eo fonosinay ireo.
F8: Mandra-pahoviana ny ora fanaterana ara-dalàna ny vokatrao?
A: ho hafa arakaraka ny habetsany izy io. Amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 7-15 andro eo ho eo amin'ny fitoeran-drano iray 20ft.Raha ny vokatra vita amin'ny embossed sy co-extrusion 3D dia mila 2-4 andro amin'ny ankapobeny isika amin'ny fizotran'ilay sarotra.
F9: Manana habetsahan'ny kaomandy farafaharatsiny ve ianao? Raha eny dia inona ny habetsan'ny kaomandy farany ambany?
A: Amin'ny ankapobeny dia manana habetsany farafahakeliny isika, 200-300 SQM izany. Fa raha te-hameno ny fitoeran-container ianao amin'ny fatra voafetra, vokatra vitsivitsy dia hataonay ho anao!
F10: Inona no fahafahanao manokana?
A: Amin'ny ankapobeny ny fahafahantsika manontolo dia 1000 taonina isam-bolana.
Cladding WPC nesorina niaraka
Fitaovana rindrina WPC ivelany
Waterproof Co-extrusion WPC Wall Cladding
WPC mitaingina ivelany
WPC rindrina mpiara-extrusion rindrina
WPC Wall Panel Fa ivelany
Tantera-drano Wood Composite plastika mpiara-extruded W ...
Làlana faha-46 an'ny baishijian,
faritra indostrialy langxi,
Mailaka: alice@lisenwpc.com Tel: 0086-0563-3830116 Finday: 0086-13635632626
Azo alaina ao amin'ny WhatsApp sy Wechat
© Zon'ny mpamorona - 2021-2025: Voatahiry ny Zo rehetra.
fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fitaovana WPC, Fanapahan-tsokosoko WPC, Fanesorana ivelany WPC, Fanesorana WPC ivelany, Rihana fametahana WPC,